Jasiiradaha Cook Cook - Niue Travel Bubble ayaa bilaaban kara bishan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Jasiiradaha Cook Cook - Niue Travel Bubble ayaa bilaaban kara bishan
Wararka Australia • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Niue • Wararka Ku Saabsan Jasiiradaha Cook • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
In kabadan 2 usbuuc kadib markii lagu dhawaaqay xumbada safarka ee udhaxeysa labada jasiiradood ee jasiiradaha Cook Islands iyo Niue, saraakiisha ayaa sheegaya in bilowga xumbada safarkan ay bilaaban doonto ugu yaraan 2 bilood kahor sidii horey loo shaaciyey. Xumbadaani waxay u oggolaan doontaa dadka socotada ah inay dhinac-u-tallaabaan karantiilka safarka ee 14-ka maalmood ah Niueans sidoo kale waxay awoodi karaan inay u safraan New Zealand bilaa karantiil sida ugu dhakhsaha badan badhtamaha bisha Janaayo, iyo goobooyin safri oo u dhexeeya Cook Islands iyo Australia ayaa sidoo kale la soo saaray.
Saraakiisha Jasiiradaha Cook Islands waxay muujiyeen in jasiiradaha Cooke - Niue safarka xumbada waxaa laga yaabaa inuu bilowdo horaantii Janaayo 2021. Jasiiradda Niue waa dal yar oo jasiirad ah oo qiyaastii 1500 mayl u jira xeebta New Zealand. Warku wuxuu imanayaa waxyar uun 2 usbuuc kadib markii Raiisel wasaare Jacinda Ardern iyo Brown ay sii daayeen warbaahin wadajir ah oo si rasmi ah ugu dhawaaqaya xumbada safarka ee labada dal.
Bilowga xumbada safarkan ayaa ah ugu yaraan 2 bilood ka hor wixii ay dawladu hore ugu dhawaaqday todobaadyadii la soo dhaafay in buundada hawadu la dhisi doono dhamaadka bisha Maarso. Xafiiska Cook Islands Raiisel wasaare, Mark Brown, wuxuu maxalliga u sheegay in howlo diyaarinta warbaahinta ay ka socdaan labada dal.
Xumbada socdaalku waxay u oggolaan doontaa dadka ka kala socda labada jasiiradood inay si xor ah u safraan iyagoon u baahnayn inay is-karantiimeeyaan 14 maalmood oo qasab ah in dadka adduunka ku nool ay hadda si fiican u yaqaannaan.
Ardern iyo Brown ayaa xilligaas sheegay inay ku amreen saraakiisha inay sii wadaan wada shaqeynta si loo dhigo dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay ka hor xumbada safarka oo ay sheegeen inay dhici doonto rubuca koowaad ee sanadka soo socda.
Warshad ku sameynta New Zealand
Ardern wuxuu horey u sheegay inay jiri doonto qaab waji ah oo loo maro buundada hawada - iyadoo talaabada ugu horeysa ee howsha ay tahay hirgelinta marinka kaaran karan la'aanta ee New Zealand ee qofkasta oo ka yimaada Jasiiradaha Cook. Jasiiradaha loo yaqaan 'Cook Islands' ayaa weli ah mid ka mid ah waddamada faro ku tiriska ah ee adduunka iyo gobolka Baasifigga si ay uga sii jiraan COVID-la'aan
Niueans waxay awoodi karaan inay u safraan New Zealand bilaa karantiil isla marka la gaaro bartamaha bisha Janaayo. Premier-ka Niue, Dalton Tagelagi wuxuu sheegay inuu wadahadal joogto ah la yeeshay dowladda New Zealand oo ku saabsan xumbo safar. Tagelagi, oo ay jasiiraddiisu sidoo kale qayb ka tahay boqortooyada New Zealand, ayaa sheegay in ka bilaabista safarka hal dhinac uu yahay waxa uu doorbidayo Niue.
“Waxaan u maleynayaa in labada dhinac ay noqon doonaan rubuc ka mid ah, waxaad dhahdaa bisha Maarso ee soo socota, laakiin waxaan rajeynayaa in wadada kaliya ay tahay Janaayo ama Febraayo ugu yaraan. Waad ogtahay, tijaabo ayaa bilaabmaysa oo la arkayaa sida ay wax u socdaan laakiin ujeedada ugu weyn iyo ujeedada weyn waxay noqonaysaa laba waddo oo karantiil ah oo lacag la’aan ah. ”
Dalton Tagelagi wuxuu yiri haddii xumbada safarka Cook Islands lagu guuleysto, markaa Niue waxay u badan tahay inay raacdo wax yar ka dib. "Dadka jasiiraddu si wanaagsan ayay u fayoobeen sannadihii ugu adkaa ee jasiiradda," ayuu yidhi.
Ka dib sanado badan oo koritaan rikoodh ah, cudurka faafa ee coronavirus wuxuu arkay waddanka 1600 ee dadka dalxiiska dalxiisku hoos ugu dhacay eber. Tagelagi wuxuu yiri inkasta oo dowlada ay dhaqaale ahaan taageereen wadamada deeqda bixiya, gaar ahaan New Zealand, hadana wax sahlan ma aheyn.
“Waxay ahayd inaan dib u noqono, waxaan u maleynayaa inaan dib ugu laabanay qaabkii hore ee badbaadada halkaan oo aan u janjeersano dhanka dhulka iyo bada si aan iskula noolaano. Way adkeyd, laakiin dhab ahaan si wanaagsan ayaan u haysannaa, ayuu yidhi.
Ardern waxay horey u shaacisay goobooyin safara oo ay la gasho jasiiradaha Cook Islands iyo Australia, oo ay tahay inuu furmo rubuca hore ee 2021.